Cali Xaaji ?guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Puntland waa in la isla magcaabaa.? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Cali Xaaji ?guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Puntland waa in la isla magcaabaa.? (Dhegeyso)
Nofeembar 25, 2013 3:02 b 0
Boosaaso, November 25, 2013 – Murashaxa u taagan xilka madaxweynenimo ee Puntland Cali Xaaji Warsame oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada ee magaaladaas, iyo weliba wufuud caalami ah oo uu ku jiro wakiilka qaramada midoobey ee Soomaaliya Nicholas Kay.
Warsame oo waraysi siiyey idaacada daljir, waxaa uu sheegay in ay ka wada-hadleen Nicholas Kay sidii ay Puntland uga dhici lahay doorasho xalaal ah iyo weliba in la isla oggaado habka ay wax u dhacayaan, sidoo kale habka loo sugayo amaanka ayuu sheegay inay ka wada-hadleen ergayga.
?Kay waxaan ka wada-hadalnay shirkii isimada ee Qardho, shirkaas ma suurta-gelin ilaa hadda shirar kale oo aan munaasib ahayn baa laga daba iclaamiyey.? Ayuu yiri Cali Xaaji Warsame
Muhiimada shirka Qardho ayuu sheegay Warsame in ay ka ?fillayeen labba arrimood oo kala ah isu soo dhowaynta beelaha Puntland iyo in la soo xulo dadkii xubnaha ahaa ee beelaha oo ay keenaan isimadii la yaqaanay ee Puntland dhisay.
?guddiga xalinta khilaafka waa kan keliya ee macno u samaynaya doorashada, waxaan isla eegnay in murashaxiinta ka shiraan sidii guddigaas loo dhisi lahaa iyadoo madaxweynuhu nagu jiro in aan annagu isla magcowno.? Ayuu yiri Warsame
Musharaxa ayaa ku baaqay in si qoto-dheer looga wada-tashado soo xuslinta guddiga khilaafkaadka ee arrimaha doorashooyinka iyo amaanka caasimada Puntland oo ah halka ay doorashadu ka dhacayso 8 Janaury 2013.
?Marjaca doorashadan ee loo noqonayaa waa dalabbaadkii madaxweynuhu dalbaday ee doorashadii tan ka horaysay, mid aan taas ahayna ma yeelanyo, ammaanku waa waxa ugu muhiimsan ee meesha yaala.? Ayuu yiri Cali Xaaji Warsame oo waraysiga uu daljir siiyey sidoo kale kaga war-bixiyey arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan maqnaanshiyaha gobollada iyo ollolaha doorashadiisa.
Dhegeyso: Jamaal Faarax oo daljir ayaa waraystay murashax Cali Xaaji Warsame
Puntland oo howl-gelisay guddi qiimaynaya dadkii ku hanti beelay duufaantii dhowaan (Dhegeyso)
EU oo ka shiraya habka loo gacan qaban karo dalalka taageerada u baahan oo ay Soomaaliya ku jirto